दाह्री पाल्नुका फाईदै फाइदा, लाग्दैनन् यी घातक रोग ! – NepalayaNews.com
दाह्री पाल्नुका फाईदै फाइदा, लाग्दैनन् यी घातक रोग !
३२ श्रावण २०७७, आईतवार १५:४१
स्कूल कलेज पढ्ने टिनएजर हुन् वा अफिसमा काम गर्ने कर्मचारी, धेरैजसो पुरुषहरुमा अचेल दाह्री पाल्ने क्रेज बढिरहेको देखिन्छ ।
अधिकांश पुरुष आफूलाई स्टाइलिस देखाउनका लागि शौखको रुपमा दाह्री पाल्ने गर्दछन् तर दाह्रीका छुट्टै फाइदा पनि छन् जो थाहा पाउन सकिरहेका छैनन् । एक अध्ययनले दाह्री पाल्दा धेरै प्राणघातक रोगबाट मुक्त हुन सकिने तथ्य सार्वजनिक गरेको छ ।
सूर्यबाट आउने परावैजनिक किरणलाई दाह्रीले सिधै अनुहारमा पर्न नदिई रोक्ने गर्दछ । त्यस्तो हानीकारक किरणलाई छेक्ने भएकाले दाह्रीले अनुहारको चमकमा क्षति हुन दिँदैन । यदि तपाईमा एलर्जीको समस्या छ भने पनि दाह्रीले सहयोग गर्नेछ । यसले एलर्जेनलाई रोकेर एलर्जी हुन दिँदैन ।
दाह्रीले धेरैजसो घातक रोग लाग्नबाट जोगाउन सहयोग गर्दछ । दाह्री पाल्नेहरु नपाल्नेहरुभन्दा जवान देखिन्छन् । सूर्यको प्रत्यक्ष किरणबाट अनुहार जोगिने भएकाले कुनै दाग, धब्बा र डन्डीफोरको समस्याबाट उनीहरु मुक्त हुन सक्दछन् । एजेन्सी
५१ वर्षीया महिलाले जन्माइन् नातिनी!	२६ कार्तिक २०७७, बुधबार १४:४७
यी हुन विश्वकै सबैभन्दा लामो खुट्टा भएकी युवती	२१ आश्विन २०७७, बुधबार १५:१७
जान्नुहोस्, कुन छालालाई कस्तो रङको ड्रेस सुहाउँछ ?	२६ भाद्र २०७७, शुक्रबार १५:०६
अनुसन्धान भन्छ– जेठो सन्तान जस्तो बौद्धिक अरु हुँदैनन् !	७ भाद्र २०७७, आईतवार १५:१२
‘मोटा व्यक्तिलाई कोरोनाको जोखिम ज्यादा’	१९ श्रावण २०७७, सोमबार १५:४२
तपाईंलाई थाहा छ ? यी कुरा महिलाले पुरुषसँग सँधै लुकाउछन्	१४ श्रावण २०७७, बुधबार १५:३५
१७ मंसिर २०७७, बुधबार १५:५०
१७ मंसिर २०७७, बुधबार १५:४३
१७ मंसिर २०७७, बुधबार १५:३२
२०२४ को चुनावी तयारी थाल्ने ट्रम्पको योजना, बाइडेनको सपथकै दिन सुरु गर्न सक्छन् अभियान ३२ श्रावण २०७७, आईतवार १५:४१
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अझै हार..
अमेरिकामा कोरोना संक्रमणबाट एक हप्ताभित्रै १० हजार जनाको मृत्यु ३२ श्रावण २०७७, आईतवार १५:४१
अमेरिकी राष्ट्रपतीय चुनावमा धाँधलीको प्रमाण भेटिएनः महान्यायाधिवक्ता बार ३२ श्रावण २०७७, आईतवार १५:४१